Farany taona miavaka miaraka amin’ny Espace Nambinintsoa sy ny Art Gout Hotel Restaurant - Madagascar Informations
Farany taona miavaka miaraka amin’ny Espace Nambinintsoa sy ny Art Gout Hotel Restaurant
28 décembre 2016 30 décembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Tsy ho olana ho an’ireo mpitia fety ny fahatapahan-jiro mandritra ny fetiny farany taona sy fandraisana ny taona vaovao ho an’ny eny amin’ny akany Ambinintsoa sy ny Art Gout Hotel Restaurant satria efa nisy fepetra manokana noraisina raha ny nambarany DR Rado tompon’ireto trano filanonana ireto.
Efa matihanina sy ampy traik’efa amin’ny fikarakarana lanonana ny Espace Ambinintsoa satria efa hananika ny faha 18 taona nijoroany. Ho afa-po avokoa ireo ho avy satria ho ampy ny sakafo tsy ho latsa-danja ny jiro maro loko ,zavatra tsara sy raitra arak’izany no ho atolotra ny mpanjifa.
Fa anisany tena mampiavaka ireto trano filanonana ireto ny fahamarinam-potonany ary afaka misakafo avy hatrany. Na izany na tsy izany anefa dia iaina ny fahatongavana mialoha mba ahafahana mahazo toerana tsara.
Ho ezahina ihany koa ny hanaovana hira ho an’ny daholobe ankoatra ny fampilalaovana sy fanentanana maro isan-karazany.
Fa ho an’ny eny amin’ny Art Gout Hotel Restaurat ihany koa dia natao miavaka ny fety satria ny Art Music no hanafana ny lanonana ankoatra ny DJ ,ary anisany tena hampiavaka ny fety ny fiarahana amin’ny Manda sea food ka ahafahana mankafy hazan-dranomasina maro isan-karazany izay tena talentany Manda Sa tanteraka.
← Tsy hafa manoatra amin’ny orinasa vahiny ny orinasa malagasy.
Tsy hanongam-panjakana ny Pasteur Mailhol →
Nitondra ny anjara Birikiny amin’ny fanampiana ny mpiray tanindrazana
9 mai 2017 Madagascar Informations 0
FISOKAFAN’NY IVO-TOERANA HAINO AMAN-TOROLALANA
29 septembre 2017 Gasikara 0